Actorylọ ọrụ ngwaahịa | Ndị na-emepụta ngwaahịa na China
Mpempe mpempe ọla maka klalị na-eji ya
Ihe: arịa mpempe akwụkwọ
Ogo: 7.5x5.5cm (ihe dị ka 5oz)
Agba: ihe dị iche iche dị.
Weta mma ọla ọcha na-acha ọla edo gburugburu na-acha ọla edo klaasị nke ịchọ mma
The kandụl ụbọchị ọmụmụ kandụl mkpọ ọ bụla gụnyere kandụl iri, anyị nwere ike ịme ọla edo, ọla ọcha, pink, rose na ọtụtụ agba.
Ihe eji acha odo odo mee ihe na-eme oriọna soy wax
Ihe: udiri agba agba maka edo edo.
Agba: acha ọbara ọbara, odo, odo na-acha odo odo, acha anụnụ anụnụ, ọchịchịrị na-acha anụnụ anụnụ, pink, odo odo, ojii, wdg, pantone agbaziri ahazi.
Wax kwesịrị ekwesị: Soy wax, paraffin wax, butter wax.
Soy waks maka ịme kandụl
Ihe: soy wax
mbukota: 25kg / akpa
Ochicha kandụl na-eme 100% owu wick na-enweghị isi
Ihe: 100% wicks owu
Akụrụngwa: Wure wicks
Aha: Ikike kandụl akwa Ista nke nwere agba: 5 * 4.1cm Nkwakọ ngwaahịa: 300pcs / katoonu, A na-eme oriọna Ista n'ụdị paraffin na akwa akwa, na-adịghị egbu egbu na anwụrụ ọkụ. Anyị nwere ike ịnye kandụl egg Ista dị iche iche dịka ịchọrọ, jiri kandụl egg Ista mee ememe Ista.
Otu ihe eji eme ihe na-acha ọcha na-acha ọcha na Pillar
Nkọwapụta Ngwaahịa: White na Ivory Lavender ísìsì ísì ụtọ Soy Simple Pillar Candles White and Ivory Lavender Scents Flagrance Soy Easy Pillar Candles, Nke a na-egosipụta kandụl foto a na-eji soy wax tinye 5% lavender isi ísì ụtọ, jiri owu na-acha odo odo, na-acha ọcha. Soy wax, enweghị mmerụ ahụ, eco enyi, ogologo oge ọkụ. Sizedị dịgasị iche dị, 5.0cm, 7.5cm, 10cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm dị elu, ọ nwere ike bụrụ omenala. Entsrọ dị iche iche nwere ike ịnya isi, lavender, vanilla, sandalwood, Jasmine, ...
Candles-3 Scented Candles Soy Wax Travel Tin Candles maka Aromatherapy
Nkọwapụta Ngwaahịa: kandụl a na-agagharị nke ọma Soy Wax Travel Tinles kandụl Aromatherapy Nke a kandụl bụ kandụl njem njem, jiri sọks waksị tinye mmanụ dị mkpa, akwa owu, agba ọla ọcha. Igo ite ahụ bụ 6.5 * 4.5cm, na-abụghị nke a, anyị nwekwara 7.2 * 8.5cm maka nhọrọ gị. Ọtụtụ isi dị, sandalwood, jasmine, vanilla, lavender, jasmine, aki oyibo & wayo, rose & sandalwood, wdg
beeswax votive kandụl, kandụl taper kandụl, kandụl ogidi beeswax, kandụl votive, kandụl beeswax, kandụl taper,